I-WST-001-2-1 S-STDOOR KIARD GARDENG LARDENCUE entsha eyenzelwe i-BBQ yensimbi engenacala ye-BBQ grill ngesiqandisi | Zhongshan Well Sure Metal Product Co., Ltd
Ukunikezwa kwethu kwama-grill amalahle, ama-grills kagesi, ukusebenza kahle kochungechunge lwegrill.
Umenzi we-steak / pizza
Spit Rooster / Spit Rotisserie
Igesi Greeddle / Teppanyaki
I-WST-001-5-1 Ukuthengisa okuphezulu ekhishini ongaphandle kwamahhala ukuma kwamakhabethe ekhishini insimbi engagqwali ne-BBQ Gill
I-WSS-CF2 Outdoor Kitche COMBOO COMBO Usayizi wokuvikelwa kwesiko Usayizi wensimbi engenasici angenzi nnsimbi bbq ngaphandle ekhishini ekhishini ekhishini
Umkhiqizi we-WST-001-2-1 China
Ikhishi elikhishwe ngaphandle kwe-WST-001-2-1-1
I-WST-001-2-1 S-STDOOR KIARD GARDENG LARDENCUE entsha eyenzelwe i-BBQ yensimbi engenacala ye-BBQ grill ngesiqandisi
1.6 Abashisekeli, i-1 side burner, kanye nokushisa okuphezulu oku-1
Ingqimba ye-90000BTU yokupheka amandla inikezela ngemisebenzi ye-grill, intuthu, i-braise, ebhakwe, yokosiwe ngasikhathi sinye, futhi ifinyelele ngisho nokushisa nokushisa okushisayo
I-2.Reavenuty yomsebenzi ophelele we-under-ungqimba ophelele wokushisa
I-thermometer eyakhelwe ngaphakathi iqinisekisa ukulinganiswa kokushisa okunembile kokushisa okunembile
I-3.one Side Burner
inikeza enye indawo efanelekile nendawo yomsebenzi
Ama-fights-lit control knobs kanye namalambu we-halogen ngaphakathi
Ungajabulela izosola ngisho nobusuku obumnyama
5. Ngokuzenzakalelayo 360 ° rotisserie
ngokulinganayo ukushisa ngakho-ke ukudla akulula ukushiswa
6.Cabinets eneminyango yensimbi engenasici
Ukugcina amathuluzi we-BBQ kanye nebhodlela legesi elihlanganisiwe
Ucingo: +86 760 86337286
Indawo yokupheka 960 * 455mm
Ukukhishwa kokushisa I-90000btu / 30.5kw
Ukokhela I-Piezo Iginiton
Ukukhishwa kwe-motor 4w (220-240V, AC50HHZ), 2.5or3r / Min
Ukwakha Insimbi engagqwali kanye ne-granite
Ukwenza I-grill eyakhelwe ngaphakathi 26.7kw, side burner 3.9kw
Isiqandisi sikagesi I-68L, 220-240V / 50Hz,
Into uqobo lwayo # 304/430 insimbi engagqwali
Ukubonakala Bahlanganiswa kalula, bahlanzwa kalula
Isicelo Ingadi / Party / Outdoor
Idivaysi yokuphepha I-Flame Safety device
-Qedayo Inqubo ye-Matte
Uhlobo lwegesi I-LPG
Sebenza I-BBQ, umenzi we-steak, ukubhoboza inkukhu
Izinga lokushisa nokubanda I-350 ℃
Ukubuka iwindi ingilazi enomsindo
I-Rotisserie Set rotisserie rod, rotisserie prong, rotisserie motor
Amagridi okupheka Insimbi engu-8mm engagqwali, ama-3pcs
I-Bottle Opener I-1PC
Drip tray 2pcs, insimbi engagqwali
Ukulawulwa kokushisa Ama-valve anokulawula okungu-180 °
Amalambu I-halogen eyakhelwe ngaphakathi ye-halogen 2pcs kanye nokukhanya kwe-LED knob Ama-6pcs
Ikhabhinethi 2 imidwebo kanye nomnyango wokufinyelela 3
◪ I-Eclatal ingumkhiqizi ochwepheshe ekukhiqizeni ama-BBQ grill / grills wegesi / ama-ovens we-pizza / ama-gizza ama-gill / ukubhema / ukubhema kwe-BBQ / imicibisholo kanye nezesekeli ze-BBQ ezingaphezu kweminyaka eyi-15.
◪ Sihlinzeka ngo-OEM womabili& Izinsizakalo ze-ODM, izinsuku zokusebenza ezi-4-7 zokuhola amasampula.
◪Sinohlelo lokuphathwa kwekhwalithi oluphelele. Singanikeza imikhiqizo ebikiwe& Isu lokuthengisa elingcono.
◪ Sinezitifiketi ezigcwele zebanga ezifaka phakathi i-EN1860-1, GS, LFGB, CE, njll.
◪ Singanikeza ngezinsizakalo ezithengiswayo ezithengiswayo nakwi-inthanethi, futhi sinikeze ngentengo yesabelomali ukuze sihlangabezane nesicelo sakho.
1. Imiphi imikhiqizo ongayikhiqiza?
Singakwazi ukukhiqiza i-Sprill yezohwebo, eyakhelwe ngaphakathi, i-grill yegesi, i-grill yamalahle, i-grill ephathekayo, ikhiphu yangaphandle, i-pizza kanye nomenzi we-steak, uFolsisserie nokunye.
2. Ungakwazi ukukhiqiza ngokuya ngamasampula noma imidwebo?
Yebo, singakhiqiza ngokuya ngamasampula akho noma imidwebo yezobuchwepheshe. Sine r&D Iqembu ngaphezu kweminyaka eyi-10 'isipiliyoni sendawo ye-BBQ.
3. Imibandela yakho yokukhokha?
Ngokuvamile, samukela i-T / T, i-L / C iyabonakala. Ngemiyalo ejwayelekile, samukela i-T / T 6 30% idiphozithi nge-P.O., Ibhalansi okufanele ikhokhwe ngaphambi kokuthumela.
4. Yini isikhathi sakho sokuhola sesampula nokukhiqizwa?
Okwesampula, kuvame ukuthatha izinsuku ezingama-7-15. Nge-oda lokukhiqiza, kuvame ukuthatha izinsuku ezingama-40-45 ngemuva kokuqinisekiswa kwesampula nokuthola inkokhelo yakho yangaphambi kwesikhathi. Isikhathi esithile sokulethwa sincike ezintweni nenani le-oda lakho.
5. Yini ukuhlanganiswa kwakho okujwayelekile kwemikhiqizo?
Sivame ukupakisha imikhiqizo ngebhokisi le-carton elijwayelekile nebhokisi lokhuni. Singakwazi futhi ukupakisha ngendlela ngokuya ngesidingo sekhasimende.
6. Imibandela yakho yokulethwa?
Samukela i-ExW, Fob, CIF, njll. Ungakhetha eyodwa elula kakhulu noma ebiza kakhulu kuwe.
7. Isikhathi esingakanani impilo yemikhiqizo yakho?
Iminyaka emi-3 uma imikhiqizo isebenzisa ngendlela efanele futhi igcina kahle.
8. Ngabe iwaranti yemikhiqizo yakho isikhathi esingakanani? Kuthiwani uma kukhona izingxenye ezaphukile?
Iwaranti yethu ingunyaka owodwa. Ngaphakathi kwewaranti, izingxenye ezaphukile zingathathelwa indawo ngokukhululeka.
9. Ngingayithola nini intengo?
Kungakapheli amahora angama-24 ngemuva kokuthola uphenyo lwakho olucacisiwe. Uma uphuthumayo, sicela uthumele i-imeyili kithi noma ushiye umyalezo kwi-Trade Manger, ukuze sikuphendule ngesikhathi.
10. Ngingasithola kanjani isampula ukuze ngihlole ikhwalithi yakho?
Ngemuva kokuqinisekiswa kwentengo, ungadinga amasampula ukubheka ikhwalithi yethu. Uma udinga amasampula nge-logo yakho, design, njll., Sicela unikeze le mininingwane kithi, ngakho-ke sikunikeza imali eyisampula. Imvamisa imali yesampula ibili kabili ngentengo yenani elikhulu. Ukubuyiselwa kwemali yesampula kuncike kunani le-oda le-bulk. Ubungako be-oda buthatha isinqumo sokuthi imali eyisampula yonke iyabuya noma vele ubuye isigamu.